Global Voices teny Malagasy » Mitaky valinteny ireo mpikatroka iray volana taorian’ny famonoana ilay mpanao gazety mpanao fanadihadiana Ghaneana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Marsa 2019 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra Rosemary Ajayi, Kofi Yeboah, Nwachukwu Egbunike Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Ghana, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nanao diabe am-pilaminana ho firaisankiana  tao Accra tamin'ny tapaky ny volana Febroary ny vondrona Fikambanan'ny Gazety ho Fampandrosoana (United Press for Development ) mba hilazana hafatra ho an'ny mpitandro filaminana fa tsy mbola fantatra na voampanga hatramin'izao ireo namono an'i Divela. Milaza izy ireo fa hitohy hatrany ny diabe raha tsy maharay valinteny ny vondrona.
Manaitra ny saina amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Ghana ny famonoana an'i Divela, izay tsy dia fahita firy ny famonoana feno herisetra an'ireo mpanao gazety, araka ny filazan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety  .
Nilaza anefa i Kofi Asante, mpikarakara ilay vondrona, fa naharay “famonoana mpanao gazety miisa 31 tao Kumasi  ny vondrona ka novonoina tamin'ny taona 2018 ny sasany tamin'izy ireo ary ny tena mahasadaikatra dia nekena ho firenena voalohany amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety taty Afrika ary faha 23 manerana izao tontolo izao i Ghana.”
Niasa niaraka tamin'ny Tiger Eye Private Investigations, sehatra fanaovan-gazety mpanao famotorana notarihan'i Anas Aremeyaw Anas  i Ahmed Hussein-Suale Divela. Nampiseho olo-malaza maro be manerana an'i Afrika ny fomba fiasan'izy ireo tsy mahazatra sady niteraka resabe amin'ny fanaovany fanadihadiana ny asa fanaovan-gazety .
Vao haingana i Divela no nandray anjara tamin'ny asa fanadihadiana izay nahitana an'i Kwesi Nyantakyi, filohan'ny federasiona baolina kitra tao Ghana teo aloha, izay sady mpikambana teo aloha tao amin'ny Vaomiera Ankapobeny ao amin'ny FIFA, ary voampanga ho nandray kolikoly mitentina 65.000 $ Amerikana. Nosazian'ny vaomiera ara-pitsarana ao amin'ny FIFA i Nyantakyi tsy handray anjara mandrapahafaty  amin'ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny baolina kitra .
Nanambara ny famonoana an'i Divela i Anas tao anaty sioka nahitana horonantsary misy azy sy ny mpikambana parlemantera Ghaneana Kennedy Agyapong  niresaka mivantana tamin'ny fahitalavitra tamin'ny volana May 2018:
Tamin'ny volana Septambra 2018, niantso ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety  i Divela tamin'ny alàlan'ny WhatsApp fa misy “olo-malaza ao Ghana mikasa ny hanao ratsy azy” taorian'ny namoahan'i Agyapong ny sariny tao amin'ny fahitalavitra NET 2 TV tamin'ny volana May 2018.
Efa 19 taona no solombambahoaka i Agyapong, mpikambana ao amin'ny Antoko Tia Tanindrazana Vaovao mitondra amin'izao fotoana. Tamin'ny ady ataony manohitra ny kolikoly, fantatra amin'ny fanaovana kolikoly hamelezana ireo manampahefana politika mpanao kolikoly – indrindra fa ireo ao amin'ny antoko misy azy  i Agyapong .
Nanamarina ny fihetsiny i Agyapong ary nilaza fa tsy natao handrisihana herisetra ny fanehoan-keviny ary niresaka momba ny disadisa izay voalaza fa nananan'i Divela tamin'ny iray tamin'ireo mpikambana tao amin'ny ekipany i Agypong. Ao amin'ny lahatsary iray hafa  , nilaza i Agyapong fa i Anas no olona ahiahiana voalohany amin'ny fahafatesan'i Divela. Hanome valisoa mitentina 100.000 Cedi Ghaneana  (eo amin'ny 19.000 dolara Amerikana) ho an'ny olona izay mahita ilay namono an'i Divela izy mba ho porofo fa tsy niantso ny famonoana azy .
Niala tao Ghana  i Agyapong rehefa avy nohadihadian'ny polisy  – nandà  mafy izy fa tsy nandositra an'i Ghana na notondroina ho voampanga.
Olona enina mifandray amin'ny famonoana an'i Divela no voasambotra ary navotsotra vonjimaika rehefa nandoa antoka. Milaza ny polisy fa “mifototra amin'ny ahiahy mitombina” ny fisamborana . Na dia izany aza, mbola tsy navoaka ny momba ireo olona ireo.
Nanambara ny tatitra nataon'ny CPJ  fa manodidina ny 53 ireo mpanao gazety manerana izao tontolo izao no novonoina tamin'ny taona 2018, “ny 34 tamin'ireo no lasibatra tamin'ny famonoana noho ny asany.” Mpanao gazety miisa 102 no novonoina noho ny asany teo anelanelan'ny taona 2016 sy 2017. Ary maherin'ny arivo ireo mpanao gazety novonoina tao anatin'ny folo taona (2006-2017) araka ny tatitra nataon'ny UNESCO  .
Niteraka hatezerana maneran-tany ny famonoan'ny manampahefana ao amin'ny governemanta Saodiana tao amin'ny Masoivohon'ny Arabia Saodita tany Istanbul tamin'ny 2 Oktobra 2018 ilay mpanao matoandahatsoratra Jamal Ahmad Khashoggi  avy ao amin'ny The Washington Post, izay nalaza be tamin'ny vaovao.
Nisy namono  tamin'ny volana Desambra 2018 i Awil Dihar Salad, mpanao gazety matihanina any Somalia. Nandositra an'i Somalia i Salad tamin'ny taona 2005, satria natahotra izy sao lasibatra, saingy niverina avy eo ary nisy namono.
Tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay 2018, mpanao gazety Rosiana miisa telo no novonoina tao amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany raha “nanadihady  ny asan'ny vondrona antsoina hoe Wagner izay vondrona miaramila tsy miankina.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/12/135727/
 diabe am-pilaminana ho firaisankiana: https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/We-need-to-unravel-Ahmed-s-killers-Group-723348#
 Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety: https://cpj.org/blog/2019/02/ghana-wont-have-press-freedom-without-accountabili.php
 tsy handray anjara mandrapahafaty: https://www.reuters.com/article/us-soccer-fifa-nyantakyi/former-ghana-fa-president-nyantakyi-banned-for-life-by-fifa-idUSKCN1N42L0
 Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety: https://cpj.org/2019/01/investigative-journalist-killed-in-ghana.php
 indrindra fa ireo ao amin'ny antoko misy azy: http://citifmonline.com/2017/08/30/cid-invites-kennedy-agyapong-a-plus-over-corruption-claims/
 lahatsary iray hafa: https://www.youtube.com/watch?v=id1DzSvK5GU
 valisoa mitentina 100.000 Cedi Ghaneana: https://www.myjoyonline.com/news/2019/January-28th/hussein-suale-murder-kennedy-agyapong-places-100000-bounty-on-killers.php
 Niala tao Ghana: https://www.youtube.com/watch?v=tJEgDc4_7PE
 tatitra nataon'ny CPJ: https://cpj.org/data/killed/2018/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=2018&end_year=2018&group_by=location
 araka ny tatitra nataon'ny UNESCO: https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/dgreport/2018
 Nisy namono: https://www.washingtonpost.com/world/2018/12/22/popular-journalist-fled-danger-somalia-he-returned-home-was-killed/?noredirect=on&utm_term=.9ba6b7dd671f